Sawirro: Dadweyne Ka Careysan Doorashada Somaliland Oo Dibad-bax Dhigay -...
Hargeysa (Wararka Maanta) – Wararka laga helayo Somaliland ayaa sheegaya in saaka dadweyne careysan ay xirteen wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Gibiley ee maamulkaasi, kuwaas oo isugu soo baxay waddooyinkaasi oo ay ku xireen taayaro.
Dadweynahan ayaa isku soo baxay, kadib markii uu doorasha golaha deegaanka ee Gibiley uu kusoo bixi waayey musharraxa UCID ee ka sharraxnaa degmadaasi.
Sidoo kale dibad-baxayaasha oo isugu yimid deegaanka Arabsiyo ayaa sheegay in la masuq-maasuqay doorashooyinka Isniintii lasoo dhaafay ka dhacay maamulkaasi.
Dibad-baxayaasha oo isugu jiro rag iyo dumar ayaa sidoo kale hakiyey isku socodka labada magaallo, waxaana arrintan ay saameyn ku yeelatay dhaq-dhaqaaqa dadka iyo gaadiidka.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in goor dambe ay halkaasi gaareen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Somaliland oo ku guuleystay inay kala dareeriyaan dadkaasi.
Xaaladda ayaa haatan degan, balse goobta ay rabshadaha ka dhaceen ayaa waxaa ka muuqda burbur iyo gubasho laamiga ah, maadaama taayaro wa weyn lagu gubay.
Somaliland ayaa waxaa todobaadkii hore ka dhacay doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka, iyada oo codadkooda ay dhiibteen dad u kor u dhaafaya illaa hal milyan oo qof.
Related Topics:careysanDadweynedhigayDibadbaxDoorashadaFeaturedSAWIRROSomalilandWararka Maanta
Wararka Maanta : Sarkaal ka tirsan ciidanka Gorgor oo lagu dilay Muqdisho - Caasimada O...
Wararka Maanta : DEG DEG: Guddiga Qaran ee Amniga Doorashooyinka oo lagu dhowaaqay - Ca...
Warka Ciyaaraha1 hour ago